विदेशी जेलमा नेपाली युवा
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी राजनप्रसाद श्रेष्ठकाअनुसार विदेशी जेलमा ५ सय ३२ जना छन् । यसमा महिला १९ जना रहेका छन् ।
यसमध्ये कतिपय गम्भीर अपराध गरेर, कति तत्तत् देशको कानुन नबुझेर उल्लंघन हुनजाँदा जेल परेका हुन् । कतिपय परिवन्दमा फसेका छन् ।
सबैभन्दा बढी इमिरेट्समा १८५, कुबेतमा ५८, कतारमा ३८, साउदीमा २४ र ओमनमा २ जना रहेका छन् । यीमध्येकै २५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ । ती मृत्यु कुरेर बसेका छन्, बचाउने कसले ?
खासगरी खाडी मुलुकमा पुगेका कामदारहरु भन्छन्– हजारौंको संख्यामा जेलमा छन् । त्यसै पनि मालिकले जेलका कैदीलाई जस्तै सताएर कामा लगाउँछन्, आनाकानी गरेर फसाएर जेल हालिदिन्छन् । मानसिक र शारिीरिक शोषण व्यापक छ, नेपाली श्रमको शोषण र यातना बढी छ । दूतावासमा गुहार लगायो भने दलालसँग मिलेर झनबढी शोषण हुन्छ, निगरानी कसले गर्ने ?
पहिले पहिले बम्बै भनिन्थ्यो, अव खाडी मुलुकमात्र होइन, तान्जानियाँसम्म पनि युवतीहरु नाङ्गो नाच्न बाध्य पारिएका छन् । हरेक दिन एयरपोर्टमा बाकसमा आउने शब र अर्धचेतन अवस्थामा फर्काइएका युवतीहरु हेर्दा लाग्छ, नेपालमा सरकार नै छैन । यतिमात्र होइन, जो समस्यामा परेर फर्किएका छन्, जो विदेशमा मरेका छन्, तिनको कल्याणका लागि जम्मा गरिएको रकममा वैदेशिक रोजगार बोर्डको हालीमुहाली छ । पाउनै पर्नेलेसमेत क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्, क्षतिपूर्तिभन्दा बढी दुःख र झमेला दिने गरिएको छ ।
सरकार छ, जनताप्रति जिम्मेवार सरकार बनेको छ । यो सरकारले विदेश जानेको यकिन तथ्याङ्क राख्ने र कुन कुन देशमा के कति युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, तिनको तथ्याङ्क राख्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा दुःख पाएको छ भने उसको राहतका लागि दूतावास उपस्थित भइहाल्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्छ भने यसका लागि सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा राजदूत भनेको आराम गर्न जाने र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई उल्टै शोषण गर्ने थलोको रुपमा दलाल कार्यालयमा परिणत हुनेछ । कम्तिमा नेकपाको सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार छ र जिम्मेवारी पूरा गर्न भनेर देखाउन जरुरी छ ।
नागरिकको आवाज सुन्ने सरकारमात्र नागरिक सरकार हुनसक्छ । यो मान्यता स्थापित गर्न सकएन भने नेकपाको ऐतिहासिक सरकारको गरिमा कहाँ रहन्छ र ? प्रत्येक नेकपाका नेता कार्यकर्ताले यो हाम्रो नेतृत्वको सरकार हो, कुनै पनि दलको सरकारभन्दा यो सरकार देशप्रति जिम्मेवार छ भनेर भन्न सक्नु वातावरण बन्नु जरुरी छ । किनकि चुनावी माघ फेरि फेरि पनि आउँछ र जनताका सामु नेकपा पटक पटक जिम्मेवारी माँग्न गइरहनुपर्छ ।
र, गलत मार्गबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य छ । गलत मार्गलाई विशेष निगरानी गर्ने तरिका विकास गरेर रोक्नैपर्छ । जो विदेश जान्छन्, बैधानिक मार्गबाट जाउन्, जानुको सबै विवरण बुझाएर जाउन्, ताकि सरकारलाई ट्य्राकिङ गर्न सजिलो होस् । जो विदेश गएका छन्, उनीहरु अन्यत्र गए भने जानकारी दिएर जाउन् । यसका लागि सरकारले विशेष सञ्जाल निर्माण गर्नैपर्छ । नेपालको सबैभन्दा राम्रो आर्थिक स्रोत रेमिटान्स हो, रेमिटान्स लिने सरकारले बुझाउने नागरिकप्रति जवाफदेहीता पूरा गर्नैपर्छ ।
हुन त युवा पलायन देशको दुर्भाग्य हो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन रोक्न जरुरी छ । नसकन्जेल विदेश गएका र जानेलाई बैधमार्ग र अनुगमन तथा तिनलाई आवश्यक पर्नासाथ सहयोग सरकारको धर्म हो । र, विदेशी जेलमा रहेकालाई तत्काल के गर्न सकिन्छ, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।